N'ihi Gịnị Ka I Mkpa Doro Anya App Data
Mgbe ị ibudatara na eji ihe ngwa gị iPhone, ị pụrụ iche mkpa nke ekpocha ngwa data site na ekwentị gị. A ole na ole akpọkarị ihe mere ime otú na-depụtara n'okpuru:
Mgbada n'usoro App Performance - Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ngwa gị na-arụ ngwa ngwa ma ọ bụ eme obnoxiously, eleghị anya ọ bụ oge kwesịrị iji ikpochapụ ya cache si gị iPhone.
Mgbada n'usoro ekwentị Performance - Ọ bụrụ na gị ngwa bụ arọ na ekere òkè bụ isi na n'ozuzu arụmọrụ nke ekwentị gị, nwere ike ị chọrọ ikpochapụ ngwa si ​​data gị iPhone na-ewepu ngwa si ​​junk faịlụ iji mbo mbuli ya ịrụ ọrụ na-ewetara ya azụ nkịtị.
Tọgharịa App ka Factory Defaults - I nwekwara ike iji kpochapụ ihe ngwa data gị iPhone mgbe ị chọrọ iji tọgharịa ngwa ya factory defaults. Ị ga-ahọrọ na-eme otú ọ bụrụ na i messed elu niile ngwa si ​​configurations na amaghị esi ha azụ nkịtị.
Ikpochapụ ngwa si data erases ya omenala nhazi na ndị niile junk faịlụ na e kere na ekwentị kemgbe ngwa e arụnyere. Ebe ọ bụ na ndị ọzọ na-na-enweghị isi faịlụ na-ewepụ n'oge data mezie usoro, ekwentị gị na ngwa na-amalite na-eme kwesịrị.
Esi ọcha App si Data si iPhone
Ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ omume na-enyere gị aka ịrụ ọrụ ma ị pụrụ ọbụna hichaa ngwa 'data si n'ime iPhone si interface onwe ya, na ụzọ kasị mma na-eme nke a na-eji Wondershare SafeEraser. Wondershare SafeEraser bụ otu oru oma ngwá ọrụ na e mere na mepụtara maka nzube.
Ọ bụghị nanị na nke a, Wondershare SafeEraser nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ na iPhone na iPad optimizing ngwaọrụ dịkwuo gị iDevices 'arụmọrụ, si otú na-enye gị ihe kacha ọgwụgwụ-ọrụ ahụmahụ-ekwe ka ị na-erigbu ngwaọrụ gị na ya zuru.
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ ndu:
Mgbe nbudata kwesịrị ekwesị version nke Wondershare SafeEraser, ị pụrụ iji mgbe usoro iji wụnye ihe omume na PC gị. Mgbe wụnye, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru iji Wondershare SafeEraser ọcha ihe ngwa si data gị iPhone:
Ẹkedori Wondershare SafeEraser na PC gị na site abụọ-ịpị ya shortcut akara ngosi.
Jikọọ gị iPhone na kọmputa na iji data USB na bịara tinyere na ya.
Ekwe ka Wondershare SafeEraser ibudata chọrọ ọkwọ ụgbọala maka ejikọrọ ngwaọrụ. (Nye nkwenye gị na-ekwe ka SafeEraser n'ihu n'ebe ọ bụla chọrọ.)
Ọ bụrụ na gị PC adịghị nwere iTunes, nye nkwenye gị na-ekwe ka Wondershare SafeEraser iji wụnye iTunes nakwa mgbe kpaliri.
Mgbe echichi completes, si akpa interface, pịa 1-Click nzacha na mkpocha na akara ngosi (icon na sweeper nnọchianya).
Na-esote interface, chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser enyocha kwa maka arụnyere ngwa ọdịnala na ha na-achọghị data na ike ga-kpochara.
Ozugbo scanning-agwụ agwụ, ego ma ọ bụ uncheck checkboxes na-anọchi anya ngwa ọdịnala onye data ị chọrọ iji wepu ma ọ bụ na-karị.
N'ikpeazụ pịa nzacha na mkpocha button na ala.
Chere ruo mgbe SafeEraser ewepu na-achọghị ngwa 'data gị iPhone.
Ozugbo mere, nso Wondershare SafeEraser ma ọ bụ ma ọ dị mkpa, ị nwekwara ike pịa Rescan button na ala ịrụ a rescan n'ihi na ihe cleanup aga-eme.
Dị ka a tụlere n'elu, iche site nhicha na ngwa ọdịnala 'data gị iPhone, Wondershare SafeEraser nwekwara ike na-arụ dị iche iche na ndị ọzọ iDevice njikarịcha aga-eme. A ole na ole ndị dị otú ahụ ihe aga-eme na-depụtara n'okpuru:
Ihichapu All Data - Nke a na nhọrọ na-enyere gị wepụ niile data na ekwentị gị nwere. Nwere ike ị chọrọ iji nke a nhọrọ mgbe ị na-eme atụmatụ na-ere gị iDevice anya ka onye na-amaghị onye, ​​na ị na-achọghị ozi nkeonwe gị ga-gụrụ jụrụ ya ajụ.
Ihichapu ehichapụ faịlụ - Ị nwere ike chọrọ iji nke a nhọrọ mgbe ị chọrọ ka gị na-ama ehichapụ faịlụ irrecoverable bụla. A na-aghọ oké mkpa mgbe ị chọrọ pụrụ ekwentị gị anya ma ị maara na ọ na e dere ukwuu mwute ozi na i nwere ike imeli-gụrụ ọ bụla n'enweghị ikike onye.
Ihichapu Private Data - ihichapu Private Data erases niile gị onwe onye faịlụ site na ekwentị gị na-eme ka ha irrecoverable ọbụna na ukwuu oru oma data mgbake ngwá ọrụ.
Space nchekwa - kwesịrị gị iDevice ka HQ / HD foto echekwara na ya na ebe nchekwa, Space nchekwa-enyere gị aka mpikota onu ndị oyiyi iji na-eji ohere na ekwentị gị optimally.
Ịbụ a mpako nwe Apple ngwaọrụ, Wondershare SafeEraser na a kwesịrị-nwere ngwá ọrụ iji mezuo gị niile mkpa. Na SafeEraser ị pụrụ ijide n'aka na ozi nkeonwe gị tọrọ na-echebe, gị iPhone ma ọ bụ iPad enye kacha arụmọrụ, na mgbe mkpa, ị na-mwute data bụ na-adịgide adịgide na mie ala wepụrụ ngwaọrụ gị tupu gị ngwaọrụ na-nyefeela ajụ maka agbatiri oge nke oge.
> Resource> ihichapu> esi ọcha égwu 'Data site na iPhone